ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့အခါ ဘာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ - Hello Sayarwon
အခုထိဆို ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတာ တစ်နှစ်ကျော်လာ ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အခုထိ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှာ ကိုဗစ်က ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သလို သေဆုံးမှုတွေကလည်း ရှိနေဆဲပါ။ ကိုဗစ် ဖြစ်ပွားနေမှုနဲ့အတူ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အပါအဝင် ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း အပတ်တကုပ် ရှာဖွေမှုတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။
ဒီရှာဖွေမှုတွေ၊ ကြိုးပမ်းမှုတွေရဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အချို့မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ စတင် ထိုးနှံမှုတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ လူတိုင်း သိချင်နေလောက်မယ့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ဒီဆောင်းပါးလေး ကနေတဆင့် ပြောပြပေးသွား ပါမယ်။
ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် ဘာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ…..
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာလည်း တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး အပါအဝင် အခြားကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးပြီးတဲ့အခါ ခံစားရသလို
ရောင်ရမ်းတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကပုံမှန် ဖြစ်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။
ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကို ရေအေးဝတ်စသန့်သန့်လေး ကပ်ပေးတာ
လက်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလက္ခဏာတွေက ၂၄ နာရီကြာတဲ့အထိ ဆေးထိုးတဲ့နေရာက နာတာ၊ ရောင်တာမပျောက်ဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။
ဖျားတာ၊ ပင်ပန်းတာတွေကို သက်သာစေဖို့ဆိုရင်
သောက်ရေ အပါအဝင် အရည် များများ သောက်တာ
ချည်သား ပွပွချောင်ချောင်လေတွေ ဝတ်တာမျိုး လုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလက္ခဏာတွေက ရက်အနည်းငယ် ကြာတဲ့အထိ မသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။
ကိုဗစ် ကူးစက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့ မလိုတော့လောက်ဘူးလို့ ယူဆသူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုဗစ်က ရောဂါဖြစ်ပြီးသူတွေမှာ antibody ထွက်နေတဲ့ ၆ လအတွင်း ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ နည်းပေမယ့်။ ကိုဗစ်က ထပ်မံ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်တာကြောင့် ရောဂါ ဖြစ်ပြီးရင်တောင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့က လိုပါဦးမယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးလိုက်ရင် ကိုဗစ် ဖြစ်သွားမှာလား……….
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးတဲ့အခါ ကိုဗစ် မဖြစ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်ဖို့သုံးထားတဲ့ ပိုးတွေက သေပြီးသား ဒါမှမဟုတ် အားပျော့နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို အသုံးပြုတာကြောင့်ပါ။
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးက messenger RNA (mRNA) ကို အသုံးပြုထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပုံစံတူ ဖန်တီးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် လုပ်တဲ့နည်းကို သုံးထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်လို့ ကိုဗစ် မဖြစ်ပါဘူး။
ကာကွယ်ဆေးက တစ်ကြိမ်ထိုးရုံနဲ့ လုံလောက်မလား………
Pfizer-BioNTech ဆိုရင် ၂ ကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်ပြီး ပထမတစ်ကြိမ် ထိုးပြီး ၃ ပတ် ဒါမှမဟုတ် ၂၁ ရက်ကြာရင် နောက်တစ်ကြိမ် ထိုးရပါမယ်။
Moderna ဆိုရင်လည်း ၂ ကြိမ် ထိုးရမှာ ဖြစ်ပြီး ပထမတစ်ကြိမ် ထိုးပြီး ၁ လ ဒါမှမဟုတ် ၂၈ ရက်ကြာရင် နောက်တစ်ကြိမ် ထိုးရပါမယ်။
ဘယ်သူတွေ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး မထိုးသင့်ဘူးလဲ………..
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးကို အခုလို အခြေအနေရှိသူတွေ မထိုးသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစားထိုးကုသမှု ခံယူထားသူတွေ
ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ဓာတ်မတည့် ဖြစ်သူတွေ
အသက် ၁၈ နှစ် အောက်တွေ
ကိုဗစ်ရောဂါ လက္ခဏာ ခံစားနေရသူတွေ( လောလောဆယ်မှာ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုရင် ရက်သတ္တပတ် ၄ ပတ် ကြာပြီးနောက်မှ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားရတာ မရှိဘူး။ အဖျားလည်း သက်သာပြီဆိုမှ ဆေးထိုးဖို့ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
အခု ပြောခဲ့တဲ့ အခြေအနေရှိသူတွေဟာ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးသည့်တိုင် လိုက်နာရမယ့် ကိုဗစ် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့ လက်ဆေးတာ၊ အပြင်သွားတဲ့အခါ ပါးစပ် နဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်တာတွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ အချက်တွေအပြင် လူစုလူဝေး ရှောင်ရှားတာ၊ အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် စားသောက်တာ၊ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်တာ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါမယ်။
ဒါမှ ကိုယ်တိုင်ကိုရော မိသားစုဝင်နေတဲ့ အနီးဝန်းကျင်က သူတွေကိုပါ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုဗစ် မကူးစက်နိုင်အောင် အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Who should and shouldn’t get the COVID-19 vaccine? https://yalehealth.yale.edu/who-should-and-shouldnt-get-covid-19-vaccine Accessed Date 18 January 2021
What to Expect after GettingaCOVID-19 Vaccine https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html Accessed Date 18 January 2021
ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့် ပိုကြီးမားလာတဲ့ နောက်ထပ်ကပ်ဘေးတစ်ခု